अध्ययनको निष्कर्ष : 'चीन होइन, फ्रान्समा देखिएको थियो कोरोनाको पहिलो संक्रमण' (रिपोर्टसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७७ साल जेष्ठ २० गते, मंगलवार ०५:५१ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ विज्ञान प्रविधि मुख्य खबर​ कोरोना अपडेट
एजेन्सी । फ्रान्सका वैज्ञानिक र चिकित्सकसहितको टोलीले युरोपमा पहिलो कोरोना भाइरसको संक्रमण जनवरीमा नभएको दावी गर्दै त्यो भन्दा दुई महिना पहिल्यै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यो समयमा चिकित्सकले कोरोना भाइरस संक्रमितको लक्षणका बारेमा जानकारी नपाएकाले ढिलोगरी संक्रमित फेला परेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
फ्रान्सका चिकित्सकले युरोपको पहिलो कोरोना संक्रमित १६ नोभेम्बर सन् २०१९ मा फ्रान्सको कोलमार सहरमा भएको बताएका छन् । फ्रान्सको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने यो सहरको एक अस्पतालमा नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म फ्लूको लक्षण भएका २ हजार ५ सय जना व्यक्ति उपचारका लागि आएका थिए ।
कोलमारको अलबर्ट अस्पतालका डा. मिचेल स्मिथ र उनको टोलीको अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिक र चिकित्सकले चीनबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले नोभेम्बरमै युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिइसकेको दावी गरेका छन् । यसअघि फ्रान्सले जनवरी २४ मा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जनाएको थियो ।
डा.स्मिथले अहिलेसम्मको अध्ययनले १६ नोभेम्बर सन् २०१९ मा फ्रान्समा कोरोना संक्रमण लिएर दुईजना बिरामी अस्पताल आएको बताए । उनले भने, 'हामीले भविष्यलाई सुधार गर्न सक्छौँ । इतिहासले भविष्य निर्धारणमा अर्थ राख्छ । हामीले अहिलेसम्म कहाँबाट फैलियो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ । हामीसँग दुईजना बिरामी सन् २०१९ को नोभेम्बरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लिएर आएका पुष्टि भएको छ । हामीले उनीहरुका एक्सरेसहितका सबै रिपोर्टको गम्भीर अध्ययन गर्यौँ ।'
अमेरिकाको वासिंङ्टन विश्वविद्यालयका पल्मोनोलोजिष्ट डा. विन गुप्ताले आफूले डा. मिचेलको रिपोर्ट सबै पढेको र उक्त रिपोर्ट सत्य भएको बताए । उनी भन्छन्, 'डा. मिचेलसँग प्रमाण पनि छ । उनको लेखाइ सिलसिलेवार छ । यो सत्य पनि हो । चीन भन्दा पहिले नै कोरोना भाइरसको संक्रमण अन्य ठाउँमा भएको हुनसक्छ । यी प्रमाणले त्यहीँ भन्छ ।'
चिकित्सकहरुले ती सबैको एक्सरे रिपोर्ट र प्रयोगशाला परीक्षणका अन्य रिपोर्ट फेरि एक पटक अध्ययन गरेका छन् । सबै प्रकारको अध्ययनबाट फ्रान्समा नोभेम्बरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको पुष्टि गरिएको छ । त्यो समयमा कोरोना भाइरसको बारेमा चिकित्सकले पहिचान र शंका पनि नगरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उनीहरुका सबै गतिविधि र रिपोर्टलाई अध्ययन गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
अहिलेसम्म चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको मानिएको छ । चीन सरकारले ३१ डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जानकारी दिएको थियो । तर संक्रमण ७ जनवरी २०२० देखि मात्र ह्वात्तै बढेको थियो ।
अमेरिकी खुफिया एजेन्सीले चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नोभेम्वरको अन्तिममा फैलिएको दावी गरेको थियो । डा. स्मिथ भन्छन्, 'सबैभन्दा पहिले पहिलो बिरामी पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि बिरामी फैलिने गति, रोगको प्रभाव तथा अध्ययनमा सजिलो हुन्छ । त्यसविरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन पनि यसले ठूलो सहयोग गर्छ ।'